ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကစားလာခဲ့ကြတဲ့ Super Marioရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Version ပါ။ ထူးခြားချက်ကို အလွယ်ဆုံး ပြောပါဆိုရင်တော့ အရင်ကကစားခဲ့တဲ့ Marioက ဂိမ်းထဲမှာ ဖန်တီးထားတဲ့အတိုင်း ဇာတ်လမ်းသွားကစားပြီး အနိုင်ရအောင်ကြိုးစားဖို့ပါပဲ။ အခု Maker2မှာတော့ ဂိမ်းရဲ့ စခန်းသွားတလျှောက် ရွှေတွေ မှိုတွေကနေ နောက်ဆုံး ထောင်ချောက်နဲ့ ရန်သူတွေကိုပါ မိမိစိတ်ကြိုက်နေရာချ ကစားလာနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သင့်အနေနဲ့ စိန်ခေါ်မှု ပြင်းပြင်ထန်ထန် လိုချင်ပါသလား? သင်ကစားမယ့် လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက် ထောင်ချောက်တွေ အများဆုံးချပြီး ရန်သူတွေ အများဆုံးထည့်ကစားပါ။ အရမ်းလွယ်ချင်ရင်တော့ ထောင်ချောက်တွေ ဖြုတ်၊ ရန်သူတွေမပါဘဲ စခန်း အဆုံးကို လွယ်လွယ်လေး သွားလိုက်ပါတော့။
ဒါဆိုဂိမ်းက အနိုင်ရဖို့ လွယ်သွားတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်က ပြန်ကြည့်ရင် မလွယ်ဘူးဗျ။ Online အနေနဲ့ ကစားလာနိုင်တဲ့ အခုဂိမ်းက အနိုင်ရမှုအများဆုံး ကစားသမားတွေရဲ့ စာရင်းကို Online ကနေ ကြည့်နိုင်အောင် ဖော်ပြပေးနေတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမှုကောင်းကောင်း မလုပ်နိုင်သေးသူတွေက နာမည်ကျော် ကစားသမားတွေရဲ့ မြေပုံစခန်းသွားအတိုင်း ၀င်ကစားနိုင်တယ်။ သင့်အနေနဲ့ ရန်သူရော ထောင်ချောက်တွေပါ များများစားစားမပါဘဲ နိုင်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ မြေပုံဖန်တီးပြီး Top Player မှာ ဗိုလ်စွဲနေရင်တော့ သင့်ကို လူရယ်စရာ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဒီတော့ မြေပုံကောင်းကောင်း ဖန်တီး၊ စိန်ခေါ်မှု အားကောင်းအောင်လုပ်၊ သင်ကိုယ်တိုင်လည်း အနိုင်ရအောင် ကစား၊ တခြားနမူနာကြည့်ပြီး ကစားသူတွေကိုလည်း သင့်ရဲ့ ဖန်တီးမှုကတကယ် ကစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားဖြစ်အောင် ဖန်တီးရတော့မှာပါ။ ဒါကြောင့် အခု Mario Maker က သင့်ကို ဂိမ်းကစားသမား တစ်ယောက်အနေနဲ့တင် မဟုတ်တော့ဘဲ ဂိမ်းဖန်တီးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ ရသနှစ်ခု ပေးနိုင်လာလို့ သဘောကျစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
Single အနေနဲ့လည်း ကစားနိုင်မယ်၊ Multi အနေနဲ့လည်း ၄ ယောက်ထိအောင် အများဆုံး ပါဝင်ကစားနိုင်မယ်။ တစ်ယောက် သမားတွေကတော့ စိန်ခေါ်မှု အားကောင်းတဲ့ မြေပုံတွေ ၀င်ကစားဖို့ လွယ်ပေမယ့် Multi သမားတွေကတော့ အဖွဲ့လိုက် ဟန်ချက်ညီဖို့ လိုအပ်တာကြောင့် ရှေ့ပိုင်းမှာ အချင်းချင်း အလိုက်သင့် ဟန်ချက်ညီ ကစားနိုင်အောင် အရင်ကြိုးစားရမှာပါ။ ဂိမ်းထဲမှာ နေ့ ၊ ည ပြောင်းလဲမှုနဲ့ အတူ မြေပေါ်၊ မြေအောက်၊ ရေအောက်စတဲ့ နေရာမျိုးစုံကို သွားလာကစားရမှုတွေ၊ ကားလို အမြန်ယာဉ် စီးနင်းသွားလာနိုင်မှုတွေလည်း ပါရှိလာပါတယ်။
အခု ဂိမ်းမှာ Mode ရွေးချယ်ကစားနိုင်မှု အားကောင်းလာပြီး အရင်လိုပဲ ဂိမ်းထဲမှာ ဖန်တီးထားတဲ့အတိုင်း ဇာတ်လမ်းသွား ကစားနိုင်မယ်၊ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် မိမိစိတ်ကြိုက် ဖန်တီးနေရာချ ကစားနိုင်မယ်၊ အဲဒီလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ Online ကနေ တခြားသူတွေ ဖန်တီးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းသွားတွေကို ၀င်ကစားနိုင်မယ်၊ သဘောကျစရာ ကောင်းလာပါတယ်။ အခုထိအောင် Mario က ကျွန်တော်တို့ စိတ်ထဲမှာ ရိုးမသွားသေးတဲ့ စိန်ခေါ်မှု ရသကောင်းတွေ ပေးနိုင်နေဆဲပါ။ အခုလို ဖန်တီးနိုင်မှုပုံစံပါ ပါလာတော့ မရိုးရတော့ဘူးပေါ့။ အရင်လို မြေပုံတစ်ခုတည်း ကစားရတာထက် မြေပုံပေါင်းများစွာ ကစားလာနိုင်တဲ့ Mario ကမ္ဘာသစ်ကနေ ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။
ကြှနျတျောတို့ ငယျငယျကတညျးက ကစားလာခဲ့ကွတဲ့ Super Marioရဲ့ နောကျဆုံးထှကျ Version ပါ။ ထူးခွားခကျြကို အလှယျဆုံး ပွောပါဆိုရငျတော့ အရငျကကစားခဲ့တဲ့ Marioက ဂိမျးထဲမှာ ဖနျတီးထားတဲ့အတိုငျး ဇာတျလမျးသှားကစားပွီး အနိုငျရအောငျကွိုးစားဖို့ပါပဲ။ အခု Maker2မှာတော့ ဂိမျးရဲ့ စခနျးသှားတလြှောကျ ရှတှေေ မှိုတှကေနေ နောကျဆုံး ထောငျခြောကျနဲ့ ရနျသူတှကေိုပါ မိမိစိတျကွိုကျနရောခြ ကစားလာနိုငျမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတော့ သငျ့အနနေဲ့ စိနျချေါမှု ပွငျးပွငျထနျထနျ လိုခငျြပါသလား? သငျကစားမယျ့ လမျးကွောငျးတဈလြှောကျ ထောငျခြောကျတှေ အမြားဆုံးခပြွီး ရနျသူတှေ အမြားဆုံးထညျ့ကစားပါ။ အရမျးလှယျခငျြရငျတော့ ထောငျခြောကျတှေ ဖွုတျ၊ ရနျသူတှမေပါဘဲ စခနျး အဆုံးကို လှယျလှယျလေး သှားလိုကျပါတော့။
ဒါဆိုဂိမျးက အနိုငျရဖို့ လှယျသှားတာပေါ့။ ဒါပမေဲ့ တဈဖကျက ပွနျကွညျ့ရငျ မလှယျဘူးဗြ။ Online အနနေဲ့ ကစားလာနိုငျတဲ့ အခုဂိမျးက အနိုငျရမှုအမြားဆုံး ကစားသမားတှရေဲ့ စာရငျးကို Online ကနေ ကွညျ့နိုငျအောငျ ဖျောပွပေးနတေယျ။ ဒီတော့ ကိုယျတိုငျဖနျတီးမှုကောငျးကောငျး မလုပျနိုငျသေးသူတှကေ နာမညျကြျော ကစားသမားတှရေဲ့ မွပေုံစခနျးသှားအတိုငျး ၀ငျကစားနိုငျတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ ရနျသူရော ထောငျခြောကျတှပေါ မြားမြားစားစားမပါဘဲ နိုငျရငျပွီးရောဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ မွပေုံဖနျတီးပွီး Top Player မှာ ဗိုလျစှဲနရေငျတော့ သငျ့ကို လူရယျစရာ ဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
ဒီတော့ မွပေုံကောငျးကောငျး ဖနျတီး၊ စိနျချေါမှု အားကောငျးအောငျလုပျ၊ သငျကိုယျတိုငျလညျး အနိုငျရအောငျ ကစား၊ တခွားနမူနာကွညျ့ပွီး ကစားသူတှကေိုလညျး သငျ့ရဲ့ ဖနျတီးမှုကတကယျ ကစားလို့ကောငျးတယျဆိုတဲ့ အနအေထားဖွဈအောငျ ဖနျတီးရတော့မှာပါ။ ဒါကွောငျ့ အခု Mario Maker က သငျ့ကို ဂိမျးကစားသမား တဈယောကျအနနေဲ့တငျ မဟုတျတော့ဘဲ ဂိမျးဖနျတီးသူတဈယောကျအနနေဲ့ပါ ရသနှဈခု ပေးနိုငျလာလို့ သဘောကစြရာ ဖွဈလာပါတယျ။
Single အနနေဲ့လညျး ကစားနိုငျမယျ၊ Multi အနနေဲ့လညျး ၄ ယောကျထိအောငျ အမြားဆုံး ပါဝငျကစားနိုငျမယျ။ တဈယောကျ သမားတှကေတော့ စိနျချေါမှု အားကောငျးတဲ့ မွပေုံတှေ ၀ငျကစားဖို့ လှယျပမေယျ့ Multi သမားတှကေတော့ အဖှဲ့လိုကျ ဟနျခကျြညီဖို့ လိုအပျတာကွောငျ့ ရှပေို့ငျးမှာ အခငျြးခငျြး အလိုကျသငျ့ ဟနျခကျြညီ ကစားနိုငျအောငျ အရငျကွိုးစားရမှာပါ။ ဂိမျးထဲမှာ နေ့ ၊ ည ပွောငျးလဲမှုနဲ့ အတူ မွပေျေါ၊ မွအေောကျ၊ ရအေောကျစတဲ့ နရောမြိုးစုံကို သှားလာကစားရမှုတှေ၊ ကားလို အမွနျယာဉျ စီးနငျးသှားလာနိုငျမှုတှလေညျး ပါရှိလာပါတယျ။
အခု ဂိမျးမှာ Mode ရှေးခယျြကစားနိုငျမှု အားကောငျးလာပွီး အရငျလိုပဲ ဂိမျးထဲမှာ ဖနျတီးထားတဲ့အတိုငျး ဇာတျလမျးသှား ကစားနိုငျမယျ၊ ဒီလိုမှမဟုတျရငျ မိမိစိတျကွိုကျ ဖနျတီးနရောခြ ကစားနိုငျမယျ၊ အဲဒီလိုမှ မဟုတျရငျတော့ Online ကနေ တခွားသူတှေ ဖနျတီးထားတဲ့ ဇာတျလမျးသှားတှကေို ၀ငျကစားနိုငျမယျ၊ သဘောကစြရာ ကောငျးလာပါတယျ။ အခုထိအောငျ Mario က ကြှနျတျောတို့ စိတျထဲမှာ ရိုးမသှားသေးတဲ့ စိနျချေါမှု ရသကောငျးတှေ ပေးနိုငျနဆေဲပါ။ အခုလို ဖနျတီးနိုငျမှုပုံစံပါ ပါလာတော့ မရိုးရတော့ဘူးပေါ့။ အရငျလို မွပေုံတဈခုတညျး ကစားရတာထကျ မွပေုံပေါငျးမြားစှာ ကစားလာနိုငျတဲ့ Mario ကမ္ဘာသဈကနေ ကွိုဆိုလိုကျပါရစေ။